Baarlamaanka Puntland oo go’aan ka soo saaray cidda leh awoodda ku simaha Madaxweynaha – Hornafrik Media Network
Baarlamaanka Puntland oo go’aan ka soo saaray cidda leh awoodda ku simaha Madaxweynaha
Waxaa maanta magaalada Garowe kulan aan caadi aheyn ku yeeshay gudiga Joogtada ah ee baarlamaanka Puntland, kaasi oo looga hadlay cidda sharci ahaan noqoneysa ku-simaha Madaxweynaha maamulka Puntland.
War qoraal ah oo ka soo baxay guddiga ayaa waxaa ay ku sheegeen in hanaanka lagu dhisay maamulka Puntland uu yahay mid baarlamaani ah, sidaas daraadeedna hadii Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay ka maqnaadaan dalka, awooda ku-simaha lagu soo wareejiyo guddoonka baarlamaanka maamulka Puntland.
Guddiga ayaa waxaa ay isku raaceen afar qodob, kuwaasi oo kala ah:-
In Hannaanka Puntland uu yahay Baarlamaani, waxayna golaha wakiilladu awoodda dastuurku siiyey ku doorteen Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland.
3.Sababkasta ha ku timaadee haddii ay labada mas’uul ay la soo gudboonaato arrinta ku xusan qodobka labaad ee dastuurka, waxay awooda ku-simaha Madaxweynuhu ku wareegeysaa guddoonka golaha wakiillada, sida ku cad qodobada dastuurka & xeerarka kor ku xusan.
4.Golaha Wasiiradu waxay xaq u leeyihiin in ay ka shiraan hawlaha ay u xilsaaran tahay Xukuummaddu.
Madaxweynaha Mareykanka oo maanta booqasho ku jooga Hindiya